बिटकोइनमा नयाँ के हुँदै छ ? - हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
बिटकोइनमा नयाँ के हुँदै छ ?
मंसिर १४, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — करिब एक दशक लामो इतिहास बोकेको विकेन्द्रित डिजिटल मुद्रा बिटकोइनको मूल्य कहिले अत्यधिक चुलिएको देख्न सकिन्छ भने कहिले यसमा भारी गिरावट आइरहेको हुन्छ । अघिल्लो वर्ष करिब यस्तै समयतिर सरदर १५ हजार अमेरिकी डलर रहेको बिटकोइनको मूल्य यस वर्ष भने खासै उकालो लाग्न सकेको छैन ।
अहिले हेर्ने हो भने एक बिटकोइन बराबर करिब ३५ सय अमेरिकी डलर पर्न आउँछ, जुन तुलनात्मक हिसाबमा निकै कम हो । तर, बजार अध्ययन गरी अहिले यसमा लगानी गर्नेलाई भने पछि मूल्य बढेका बेला यो फलदायी सिद्ध हुन सक्छ । त्यसैले बिटकोइन खरिद गर्न चाहनेका लागि अहिलेको समय उपयुक्त छ ।
अमेरिकी राज्य ओहायोमा अबदेखि बिटकोइनका माध्यमबाट कर भुक्तानी गर्न पाइनेछ । यो नियम लागू गर्ने पहिलो राज्य नै ओहायो बनेको छ । हाललाई व्यवसायमा मात्र सीमित राख्ने भनिएको यो नियम छिट्टै आममानिसको पहँुचमा समेत पुर्‍याउने लक्ष्य त्यहाँको राज्य सरकारले लिएको छ । अधिकांश सेवासुविधा डिजिटल माध्यमबाट लिन सकिने अमेरिकामा यो नियम छिट्टै देशव्यापी हुने आकलन विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । स्थिर विनिमय दर नभएका कारण कर तिर्ने समयमा भएको दरलाई नै आधिकारिक मान्ने निर्णय पनि पारित हुने भएको छ । चीन, बोलिभिया, इक्वेडर, किर्गिजस्तान, नेपालजस्ता देशमा भने बिटकोइनलगायत सम्पूर्ण क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग वर्जित छ । ताइवान, भियतनाम र रुसमा यो आंशिक रूपमा वर्जित छ ।
नर्वेमा सरकारले बिटकोइन माइनर्सलाई दिँदै आएको विद्युत् अनुवृत्ति खारेज गर्ने भएको छ । सन् २०१९ को सुरुआतसँगै व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा बिटकोइन तथा अन्य डिजिटल मुद्रा माइनिङ गर्दै आएका निकायले करसहित विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसअघि भने माइनर्सका हकमा उक्त नियम लागू हुँदैनथ्यो । बिटकोइन माइनर्सले यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि विभिन्न सरकारी पदाधिकारीले भने यसमा आफ्नो सहमति जनाएका छन् । भविष्यमा डिजिटल मुद्रा खारेज नै गर्नेसम्मको संकेत दिँदै आएको नर्वे कालान्तरमा प्रविधिको विकासमा बाधक नै बन्न सक्ने तर्क पनि नआएका होइनन् ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७५ ०९:५२
‘हे सिरी, ओके गुगल’
मंसिर १४, २०७५ हेलो शुक्रबार
काठमाडौँ — रीको चीर प्रतिद्वन्द्वी गुगल एसिस्टेन्ट अब सिरीबाटै खुल्ने भएको छ । एप्पलले चाहेर यसो हुन दिएको भने होइन । सिरीलाई ‘हे सिरी, ओके गुगल’ भनेपछि गुगल एसिस्टेन्ट खुल्छ ।
यो चलाउँदा केही अप्ठेरो भने छ । किनभने यसलाई सुचारु गर्न त्यति सजिलो भने छैन । आइओसमा गुगल एसिस्टेन्ट एपलाई अपडेट गरेर त्यसलाई सिरीको सर्टकटका लागि सेट गर्नुपर्छ ।
सिरीले कुनै पनि एप वा फिचर खोल्न वा चलाउनका लागि आवाज रेकर्ड गर्न दिन्छ । जस्तै, आफ्नो रुचिको गीतको लिस्ट, कसैलाई मेसेज गर्नका लागि सिरी सर्टकर्ट बनाउन सकिन्छ ।
गुगल एसिस्टेन्ट खोल्नका लागि गुगलले नै सुझाउने शब्द भनेको ‘ओके गुगल’ हो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर ‘हे गुगल’ पनि राख्न सकिन्छ । यो सबै सेटअप गरेपछि सिरीको प्रयोग गरेर गुगल एप खोल्न सकिन्छ ।
आइफोन वा आइप्याडमा गुगल एप खोल्नका लागि भने तिनलाई अनलक गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसपछि गुगल एसिस्टेन्ट एपले हामीले बोलेको सुन्छ र त्यहीअनुसार प्रतिक्रिया दिन्छ । तर, गुगललाई केही भन्नुभन्दा पहिला त्यो खुल्नका लागि प्रतीक्षा भने गर्नुपर्छ ।
यति धेरै मिहिनेत गरेर सबैले यसको प्रयोग गर्छन् भन्ने होइन । तर सिरीमार्फत गुगल चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आफैंमा रमाइलो हो । सिरीबाट गुगल एसिस्टेन्टचलाउने हो भने आफ्नो प्राइभेसी सेटिङमा भने ध्यान दिनुपर्छ । किनभने उक्त एपले तपाईंको ‘वेब र एप एक्टिभिटी’ लाई हेर्ने अनुमति दिनलाई अभिप्रेरितगरिरहन्छन् ।
फेसबुकले समाचार किन्ने
पासवर्डबिनै गुगलका सेवा
एपलाई कडाइ गर्दै एप्पल